Ndị isi ejiji maka ntutu isi ogologo oge 2018 - ihe kachasị ọhụrụ, ọnọdụ, akwụkwọ ọhụrụ
Utu isi maka ogologo ntutu 2018 - 45 foto nke kachasi ejiji ejiji nke oge ohuru
Uwe - akụ nke ọ bụla mara mma, nyere site na okike onwe ya. Nkume mgbagwoju anya, ọmarịcha edozi isi, obere akacha - ọtụtụ nkedo dị iche iche. Utu ntutu maka ogologo ntutu ogologo 2018 - ohere ọzọ ilele anya n'izu ubochi di mma ma na agba.
Haircuts maka ogologo ntutu 2018 ejiji ejiji
Enwere echiche na ntutu isi na ntutu dị n'okpuru ebe a bụ obere ihe, ọ bụ nanị iji mechie ọdịdị ahụ. Nke a na stereotype nke ọma na-agbaji edozi ejiji eji ejiji eji eme ihe ngosi 2018 n'ime ogologo ntutu isi:
Isi ntutu isi na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ dị mma. Ndị na-ede akwụkwọ na-enye ndụmọdụ dịtụ na-agbagọ agba.
A na-atụ aro ụmụ agbọghọ ndị na-eme ihe na-adịghị ike isi na-eji edozi isi, dị mma ma dị ogologo, mgbe ntutu na-adabere na ntutu.
Ogige ndị ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke edozi isi maka ogologo ntutu isi.
Ebumnuche ndị na-ezighị ezi bụ ihe ọzọ na-akpali akpali.
Ihe ndị dị mkpa bụ agwa ndị toro ogologo ma kwupụta quads.
Utu isi maka ogologo ntutu isi na osisi 2018
Ụzọ dị mma isi mepee ihu gị, iji mee ka anya gị doo anya, ka afọ ole na ole funahụ gị. N'otu oge ahụ, na-edozi ụdị edozi ọhụrụ, ị na-arụ ọrụ dị mkpa, dịka ọ ga-ewe ọtụtụ afọ iji too ya:
N'afọ ọhụrụ ahụ, ọnụ ụlọ na-alaghachi na mmepụta. Ha enweghị ike iru nku anya ma ọ bụ kpuchie ha.
Tinyere nke a, ndị na-aga n'ihu na bangs na-abịa, oké, nke na-adịghị edozi ntinye. Ha dị mma maka ntutu isi ụmụ nwanyị maka ogologo ntutu 2018 na ọbụna na-ebipụ.
Arched - nsụgharị ọzọ ejiji, nke na-ejikọta ibe ya na peeji nke elongated.
Ịkpụ ntutu maka ogologo ntutu na-enweghị akwụkwọ 2018
Enweghị mpi ọ bụghị mgbe niile ka ọ na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na mmemme a na-enye onye egwu na ntutu isi, ụzọ edozi isi na-enweghị ya bụ nke a nụchapụrụ na nke a. Enweghị mkpa maka mgbakwunye ọzọ, gịnị mere na ụtụtụ dị gị n'aka obere oge ole na ole. Ejiri ntutu isi ejiji ogologo oge 2018 maka ogologo ntutu isi adịghị ekwu mgbe niile n'ihu nkọwa a. Bob, ihe dị iche iche na-adọkpụ, mmiri ozuzo, ọtụtụ ihe ndị na-eme ka ọ bụrụ ihe na-enweghị atụ n'emeghị ka ntutu dị mkpirikpi n'egedege ihu.
Ụdị ntutu isi maka ogologo ntutu ogologo 2018
Ezi ngwugwu na-enyere aka ịchọ mma nke ọma, ma ọ bụghị nke dị mma na nke ahụ, na ihe ụwa nke oge a na-egosi. Na-egbuke egbuke, nke pụrụ iche, na-eji ụwa edozi isi ogologo maka 2018. Ozugbo onye ọkachamara nwere nkà na nkà nwere nkà, ị nwere ike gbanwee ruo n'ókè nke na ị gbanwee na òké na-acha anụnụ anụnụ n'ime ọkaibe mara mma. Ntutu ntutu isi maka ogologo ntutu ogologo 2017-2018 dịgasị iche iche, mana otu mmetụta ahụ:
Ihe ndị na-eme ka mmiri na-egbuke egbuke na-enye otu ntutu isi ma n'otu oge ahụ na-edebe mkpọchi ndị na-adịghị mma.
Ụdị mgbatị na-enyere aka na-egbuke egbuke na nke mbụ.
Isi nkwọ isi na whiskey bụ ụzọ na-enweghị isi nke igosipụta ụdị ọdịdị dị mma.
Ntughari ntutu maka ogologo ntutu 2018
Ihe na-akpali akpali nke cascade na-eme ka edozi isi dị mma. Ọ bụrụ na ọ dị ka ọdịdị ya na-echegbu onwe ya site na oge ikpebi mmeghari ohuru zuru oke na mgbanwe ọ bụla. Karịsịa ebe ọ bụ na cascade bụ isi okwu n'ime ihe a gụnyere n'ime echiche ejiji nwanyi fashionable 2018 maka ogologo ntutu isi. N'afọ a dị ugbu a, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-eme ka ụda dị iche iche dị mma. Ha na-eme mkpụmkpụ naanị 5-10 cm n'elu ịkpụ.
Mgbe ị na-etinye afọ a, a na-eji mkpọchi mkpọchi, nke ka ukwuu na nnukwu ma ọ bụ nke na-agbanye olu, na-esiteghi n'elu, kama site n'etiti ma ọ bụ na njedebe. N'ime ihe ndị na-edozi isi maka ogologo ntutu isi nwere na 2018, bụ ọnọdụ nke etiti. Ọ bụrụ na ụlọ akụ ahụ kwesiri ịhọrọ, họrọ akara ma ọ bụ ogologo akara dị n'okpuru nku anya.
Asymmetrical ogologo haircuts 2018
Mmetụta ndị na-ezute azụ bụ ihe na-eme nke afọ ndị gara aga, oge ugbu a abụghị ihe ọzọ. A na-ekwenyekarị na ọ na-aga nanị ụmụ nwanyị na-eto eto ma na-asọpụrụ ejiji. N'ịbụ ndị kpebiri na ị ga-enwe ntutu isi maka ntutu ogologo 2017-2018, ị ga-atụfu na afọ ole na ole ma nweta ihe ọhụrụ na-akpali akpali. Otu n'ime ọdịiche dị mma bụ ogologo oge na akụkụ dị iche iche nke isi. Ihe ọzọ, nke na-adighi adọrọ adọrọ - ngwugwu na obere mkpuru n'elu na elongated strands si n'okpuru. Mmetụta ahụ nwere ike ịnweta ma ọ bụrụ na ọ na-agbanwe ma dị mma.
Obere ntutu isi ya na ụlọ nsọ 2018
Egwuregwu mgbe ụfọdụ na-ewepụta ụdị ihe dị iche iche. N'ihe dị ka afọ iri gara aga, ọ siri ike iche na ụmụ agbọghọ ahụ, ma e wezụga ndị nnọchiteanya nke ngalaba, ga-akpụ isi na ụlọ nsọ. Na oge anyị, a na-ewere edozi ejiji ogologo maka 2018 dịka nhọrọ ọhụụ. Nchikota nke oke nke ugbua nke uzo na obi ike nke ulo akwukwo ndi enweghi ahihia bu nchikota onwu obula maka odidi di iche iche.
N'ịbụ onye ọdụ ma ọ bụ ụyọkọ, ị na-egosipụta ihe niile na-eme ka ịkpụ ntutu isi . Igwe ntutu isi na-enye gị ohere izobe ihe omimi a. A na-ejikwa ntutu isi ya kpuchie nke ọma na ụdị ejiji ọ bụla maka agba ogologo 2018. Elongated square, a ladder, bean, a luxurious cascade - ọ bụla mbipute dị. Ọ dị mkpa na akụkụ ahụ dị mma ga-abịakwute gị, chọọ mma.
Ogologo Ogologo Isi Agbanwe 2018
Egwuregwu ndị na-eme ka ị nwee ike iwusi olu nke ntutu isi ike ma "mechie" curls na-enupụ isi, gụsịrị akwụkwọ iji meghe ihu. Iji nweta mmetụta nke ndị na-eji ntụrụndụ "ragged" na-ejikarị agụba eme ihe. Ntutu isi nke 2018 maka ogologo ntutu isi na eriri adọkpụ na-adọrọ mmasị na mgbanwe nke bean elongated. Ntughari di iche iche, nke gunyere uzo nke buckles, di nma ma di nma. Ihe na-adọrọ adọrọ nke rhapsody, nke nwere obere ntutu isi na nape, kama na mpaghara ala. A na-enwekwa eriri ndị na-agba ụra na ọkwa ndị a kpọtụrụ aha.
Ogologo ntutu isi ogologo oge 2018
Ndị nwere ahịhịa mara mma na isi ga-amasị ụdị dịgasị iche iche nke ọdụdụ anụ ọhịa. A na - akpọ aha ahụ n'onye ziri ezi site n'ile anya: ụda azụ si n'azụ nwere ọdịdị nke yiri nke V, ma dị ka ọdụ nke ajọ mma. A na - ejikọta ntutu isi ndị dị otú ahụ na 2018 maka ogologo ntutu isi site na mpempe akwụkwọ gradient, nke a ga-atụle mgbe e mesịrị.
Ọ bụrụ na curls dị ogologo, dị nro ma dị mkpa, mgbe ahụ, edozi isi ga-enwe ịkpụchasị nke ọma. Isi ntutu isi siri ike ịkwado, ma "ọdụ" ahụ nwere ọdịdị mara mma. Ịgba aghara aghara - enweghị ihe mere ị ga-eji hapụ ọdụdụ anụ ọhịa ahụ mara mma! Karịsịa ebe ọ bụ na ngwá agha nke ngwa ngwa ịgbatị dị ukwuu. Ọtụtụ mgbe, ndị omenkà na-ejikọta ọdụdụ anụ ọhịa na-emepụta ihe, na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma.
Akpịrị isi ogologo oge 2018
N'iburu na ejiji ejiji, ọ bara uru ịkwapụ site na nchịkọta na-agwụ ike maka ọdịmma. Ịgbanwe ụdị edozi ahụ, ị ​​nwere ike ịrụpụta ihe dị ịtụnanya. Ndị na-edozi ntụrụndụ mara mma dị njikere ịnye ndị ahịa ha ogologo ntutu isi 2018:
Mmetụta dị ka ihe ịma aka na ịdị mma na ịdị ùgwù. Ihe edere n'elu gụnyere mkpụrụedemede kachasị elu na ntị ma ọ bụ akara olu na eriri na-enweghị isi na ọkwa nke abụọ, ọbụna ma ọ bụ ihe ọkpụkpụ.
Ihe ọzọ na-adọrọ mmasị, mgbe nna ukwu na ntutu isi a na-emepụta ihe dị egwu, nke na-adịghị agbaze site na bangs ruo n'ogo ogologo nke ntutu ma ọ bụ mgbanwe mgbanwe dị na mmiri.
Icheghị nchefu, obi ike na-eme ka ihe ahụ mejupụtara ma kpochapụ ọ bụghị nanị ụlọ nsọ, ma ọkara isi. Ekegharịrị n'akụkụ a nke ụkpụrụ ahụ ga-eme ka àgwà ahụ dịkwuo mma.
Ụdị edozi isi maka ogologo ntutu isi na 2018 gụnyere ọtụtụ sesson. Ọ na-ele anya na ọkpụkpụ, ogologo curls dị mfe ịdina ala. Innovation mejupụtara n'eziokwu na tupu e jiri ya mee ihe n'ogologo ma ọ bụ ọkara ogologo. Mkpụrụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-eji nwayọọ nwayọọ eche ihu na oval, na-ada n'akụkụ n'otu akụkụ, ihe mere ha ji jiri nrubeisi na-edina n'ọnọdụ ha.
Ịkpụ isi maka ogologo ntutu 2018 - ejiji ejiji
Uzo eji eme ihe nke ga-emeri oge a, aburula ihe edere. Otú ọ dị, enwere nuances dị mkpa nke chọrọ nlebara anya ụmụ agbọghọ ndị na-agbaso mgbanwe dị iche iche n'ụwa na ụdị ejiji:
N'afọ a, a na-egosi ya ka ọ na-eyi ntutu isi, na-agba ya n'akụkụ ya. Ya mere, jụọ nna gị ukwu ka ị mee ntutu isi na nke a, n'ọnọdụ dị oke njọ, ị ga-etinye ntutu isi gị n'ụzọ dị otú a n'onwe gị.
O b ur u na e nwere ihe nd i na-eme n 'uz o na-ad igh i mma, nye ihe nd i ga-eme ogologo oge, n' ud i ma obu na ak uk u, nke b 'u af o ah u na n' on u. Yiri ha ka ha daa anya gị.
Na-achọ ịkpụ ntutu isi na ntutu isi ogologo oge 2018 na-akwakọba n'oké ebili mmiri, ọ bụghị n'elu n'elu, kama site n'etiti ogologo ma ọ bụ na njedebe.
A na-eji ákwà ntutu na ákwà ejiji maka ogologo ntutu 2018
Ihe eji ejiji ogologo maka isi ogologo ntutu isi bu 2018 tinyere ncha. Nke a bụ otu n'ime ọnọdụ na-egbukepụ egbukepụ, nke, site n'iji nkà eme ihe, na-agbanwe ọbụna ụdị edozi kachasị mfe:
Akpụkpọ ụkwụ na-eme ka ọkpụkpụ na-egbuke egbuke dị iche iche na ejiji ejiji, nke ahụ bụ, imechi eriri nke eriri ndị ahụ site na ịmịnye aka na nsọtụ.
A na-eme ka ọdụdụ na ọkpụkpọ anụ ọhịa ahụ pụta ìhè n'ụzọ doro anya site na ojiji na onyinyo, dị iche iche site na ntụgharị mgbanwe site n'ọchịchịrị ruo n'ìhè.
A na-eji shading mee ihe ọ bụla ogologo haircuts 2018: square, agwa , cascade, asymmetry.
Ụdị pikselị dị njọ bụ ihe na-emekarị maka obi ike.
Nke ụda olu na ejiji ejiji na-enweghị yellowness - ájá, platinum, pink. Egwurugwu okike na - agbakwasịkwa - chocolate, ọla kọpa, na nchara ọla. Purple, coral, blue strands ga-eme ka onyinyo nke ndị nnupụisi ahụ dịghachi ndụ.
Imepụta ntu "iko agbajiri"
Street fashion na Paris 2013
Ngụsị akwụkwọ - Ụdị ejiji
Sneakers Adidas - nchịkọta ọhụrụ 2016
Ụdị ejiji na edozi isi
Jeans - Mmiri-N'oge okpomọkụ 2014
Egwuregwu ndị eji eme ihe 2016
Ihe eji eme ihe na 2013
Obere igwe mmiri 2014
Uwe ejiji mara mma
Mgbụsị akwụkwọ nchịkọta nke etemeete Zyvanshi 2013
Azụmahịa Ejiji Maka Ndị Nwanyi Niile 2015
Ememe Mgbụsị akwụkwọ 2014
Kedu uwe ime akwa kacha mma?
Mkpịsị ụkwụ ikpere ụkwụ
Angelina Jolie na Brad Pitt maka oge mbụ mgbe ịgba alụkwaghịm na nzuzo zutere
Kuki kuki kuki - uzommeputa
Tachycardia na ụmụaka
Kedu ka ị ga-esi weghachite onye ahụ nke tụbara gị?
Polenta - a uzommeputa maka kpochapụwo efere na mbụ nsụgharị na nwekwara
Musaka na eggplants na poteto - uzommeputa
Ebe a na-esi na tebụl
Iberis - na - eto eto
N'ime ime ụlọ-Khrushchev
Kedu ka ndị akụkọ ihe mere eme si yie?
Nwatakịrị na-aṅụ mmiri dị ukwuu
Marshmallow ala jaket
Lampshade nke aka aka
Manka na aquarium azụ - ọgwụgwọ
Dieffenbachia - nlekọta ụlọ